तनुश्रीले नानामाथि लगाएको आरोप कत्तिको साँचो हो ? भिडियोले गर्यो खुलासा !
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जनतनुश्रीले नानामाथि लगाएको आरोप कत्तिको साँचो हो ? भिडियोले गर्यो खुलासा !
तनुश्री दत्ताले करीब १० वर्षपछि बलिउडमा त फर्किइन् तर फर्किने बित्तिकै उनले अभिनेता नाना पाटेकरमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाइन् । तनुश्रीले फिल्म ‘हर्न ओके प्लीज’ को क्रममा डान्स गर्ने बहानमा नानाले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको बताएकी थिइन् ।
यद्यपि, नाना पाटेकरले भने यस कुराको खण्डन गरेका छन् । उनले तनुश्रीलाई कानुनी सूचना दिने धम्की पनि दिएका छन् भने ‘हाउसफुल ४’ को छायांकन लगत्तै पत्रकार सम्मलेन गरी सबैलाई जवाफ दिने बताएका छन् ।
हाल यस विषले बलिउड तातेको छ । एकातिर तनुश्री आफ्नो आरोपका लागि अडिक छन् भने अर्कातिर नाना पाटेकर आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने पूरा कोशिस गरिरहेका छन् ।
यसैबीच तनुश्रीको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका कार्यकर्ता तनुश्रीको गाडिमा हमला गर्दै गरेको देखिएको छ । यो भिडियो २००८ को हो जसमा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका कार्यकताले उनको गाडीमाथि निरन्तर हमला गर्दा पनि उनी कारमा एकदमै एक्ली र अत्यधिक शान्तिका साथ बसेको देख्न सकिन्छ ।
घटनाको जानकारी हुनेबित्तिकै उनीमाथि हमला गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो भने तनुश्री र उनको गाडीलाई सकूसल घर पुर्याइएको थियो । तनुश्रीले आफूमाथि हमला भएको भन्दै हमला गराउने आरोपमा नानामाथि उजुरी गरेकी थिइन् । तर, त्यसको असर नानमाथि परेको थिएन ।